Entrecote - စာရွက်
ပြင်သစ် entrecote ထံမှဘာသာပြန်ထားသောနံရိုးပေါ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့, ဒီပန်းကန်အမဲသားသို့မဟုတ်နွားငယ်သားကနေကိုဖန်ဆင်းသည်, သို့သော်လည်းသိုးသငယ်ကိုသုံးစွဲဖို့စိတ်ကူးသည်။ ကင်ဘို့တချို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ချက်ပြုတ်နည်းများ, ငါတို့သည်သင်တို့ပြောပြလိမ့်မယ်။
အဆီတစ်ကင်နွားငယ်သားလစာအာရုံကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ, သူကအဖြူဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်အဝါရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကအဟောင်းတိရစ္ဆာန်များ၏အသားကိုဆိုလိုသည်။ roasting သောအခါ, တစ်ဦးမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ရှိသည်နှင့်ခက်ခဲတဲ့နှင့်အရသာမရှိသောအရပါလိမ့်မယ်။
ကင် - 1 pc; ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေနံနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တုံးနဲ့မုန့်ဖုတ်စာရွက်လူး, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူအမဲသားကိုပွတ်ပေးပါ။ သင်တို့သည်လည်းအခြားမည်သည့်နံ့သာမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဆားကဘောဇဉ်စဉ်အတွင်းတိုက်ရိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်, မလိုအပ်ပါဘူး။ 170-180 ဒီဂရီအပူတစ်ခုမီးဖိုတဖို၌ဖုတ်အသားကင်နှင့်အတူသင်္ဘောနှင့် 50 လောက်မိနစ်ဖုတ်ရမည်။ အောက်ပါစစ်ဆေးစိတ်အားထက်သန်: သင်ပွင့်လင်းမှုရှိရမည်, ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြန့်ချိသောအရိုး, ဖျော်ရည်, ဖို့နေရာတစ်ဦးချွန်ထက်သောဓါးနှင့်အတူအမဲသားကိုထိုးဖောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအသားထည့်သွင်း, ပူနှင့်အအေးနှစ်ခုလုံးကိုစားပွဲမှထောက်ပံ့စေခြင်းငှါ သုပ် "Chafan" ။ စာရွက်အညီကိုပြင်ဆင်ပါကအရည်ရွှမ်းနုရယူသည်။
ကင်သိုးသငယ် - 1 ကီလိုဂရမ်;
kurdjuchnyj အဆီ - 100 ဂရမ်;
ဝိုင်ဖြူ - 100 ml ကို;
ခရမ်းချဉ်သီး -2PCs; ။
သံလွင်ချွတ်ချွတ် - 200 ဂရမ်;
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, အခြောက်လှန်းဇီယာစေ့, cilantro - မြည်းစမ်းဖို့။
ကင်နှစ်ပိုင်းဖြတ်, ဆားနှင့်အတူပွတ်, ငရုတ်ကောင်း, အဖြူရောင်စပျစ်ရည်ကိုသွန်းလောင်း။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ် Blender သုံးပြီးစင်ကြယ်သောအသွင်ပြောင်းနှင့်အမဲသားကိုမှထည့်ပါ။ လည်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှိုးဆော်ခန့်5နာရီအသားစိမ်ရန်ခွင့်ပြု, စိတ်ပျက်ကြက်သွန်နီနှင့်နံ့သာမျိုးရှိပါတယ်သွန်းလောင်း။ ဒါကြောင့်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, ရေနံနှင့်အတူ greased တစ်မုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်သူတို့ကို ထား. , ပါးလွှာပြား kurdjuchnyj အဆီသို့ခုတ်ဖြတ်။ ထိပ်တွင် marinated အသားချပ်ထားတော်မူ၏။ ရံဖန်ရံခါပြန်ထွက်သွားသည်အသားဖျော်ရည်ရေလောင်း, 40-50 မိနစ်အကြောင်းကို 180 ဒီဂရီမီးဖိုမှတက် preheated အတွက်သင်္ဘောကို။ တစ်ပန်းကန်ပေါ်ပြန့်နှံ့ပြီးဆုံးသိုးသငယ်ကိုအသားကင်, သံပုရာချပ်, သံလွင်ကွင်းနှင့်အတူအလှဆင်။ တစ်ဘက်ပန်းကန်ကဲ့သို့သင်တို့တင်ပြနိုင်ပါတယ် ဆန် Patti သို့မဟုတ်ပွငျသစျ fries ။
ပိုလန်အတွက်နွားငယ်သား၏ Entrecote - စာရွက်
နွားငယ်သား (ပါးပါးဒေသ) - 700 ဂရမ်;
အမဲသားကိုဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူပွတ်သပ်, တွန်းလှန်, နှစ်ပိုင်းပိုင်းခြား, ရုပ်ရှင်ထဲကနေသန့်စင်။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအစရိုက်နှက်ကြက်ဥ၌နှစ်ပြီးသောနှင့် breadcrumbs နှင့်ထဲမှာလှိမ့်နေသည်။ ပူပြင်းတဲ့ skillet တွင်ထောပတ်အရည်ပျော်နှင့်ချက်ပြုတ်သည်အထိနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင်အသားကင်ကြော်။ အမဲသားကို၏အသီးဖျော်ရည်လောင်းဖို့အဆင်သင့်ကြော်စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့နိုင်ပါသည်။
ရွှေဖရုံသီးနှင့်အတူဆန် - စာရွက်
ရိုးရှင်းချက်ပြုတ်နည်းများ - မှိုနှင့်အတူသုပ်
လူတ Scorpio ချစ်သောသူအဖြစ်?
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစူပါခွေး $ 15000 တစ်လဝင်ငွေ!
ဖို့အတွက် Titans တွေက - ဖြစ်ကြပြီးဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာသိမ်းပိုက်ရာအရပ်အဘယ်သူနည်း
အဘယ်သို့ပြုရမည် - မိုးလေဝသ-ရိုက်နှက်နှုတ်ခမ်း?
ဆန့်၏ technique ကို
ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုအစားအသောက် - အနုတ်တစ်လလျှင် 24 ကီလိုဂရမ်
Kykkos ကျောင်းတိုက်, ဆိုက်ပရပ်စ်
ဂျာမန်သိုးထိန်း - ဝိသေသလက္ခဏာများမွေးမြူရေး